Fifidianana filohan’ny Repoblika: hifampitana marimarina ireo kandidà matanjaka | NewsMada
Fifidianana filohan’ny Repoblika: hifampitana marimarina ireo kandidà matanjaka
Raikitra ny fifidianana filohan’ny Repoblika… Efa tsinjo mialoha fa ho maro ireo kandidà. Misy ny tena matanjaka sy vonon-kandresy; ao ny miala vela tamin’ny fifidianana teo aloha, ny mitsapatsapa, ny kajikajy…
Hifampitana amin’izao fifidianana filohan’ny Repoblika izao ny filohan’ny Mapar, Rajoelina, sy ny filohan’ny Tim, Ravalomanana. Hazava amin’izay ny “Raharaha 2009”: iza no iandanian’ny vahoaka? Eo koa ny filoha am-perinasa nanorina ny HVM, Rajaonarimampianina: hazava ny aminy sy Rajoelina fa kisendrasendra noho ny “Ni… Ni… ” sy ny fisoloan-toerana tamin’izany no nahavoafidy azy teo? Toy ny aminy sy ny mpisolo toerana an-dRavalomanana tamin’ny fifidianana, desambra 2013: iza no tena lanim-bahoaka?
Na izany aza, nanova zavatra betsaka izay dimy taona tsy nahombiazan’ny fitondrana izay. Izay ny anisan’ny irotsahan’ireo Praiminisitra teo aloha isany toa an’i Beriziky Jean-Omer, ny Jly Ravelonarivo Jean, i Mahafaly Solonandrasana, i Monja Roindefo. Eny, na ny minisitra teo aloha toa an-dRabary Paul sy Ratsiraka Roland aza.
Tsy manaiky ho mpitazam-potsiny
Izay tsy fahombiazan’ny mpitondra izay koa ny tsy mampitazam-potsiny ireo tsy nitsaha-niteny nandritra izay dimy taona izay toy ny mpahay toekarena sady filohan’ny FMI-Malagasy, Ratsietison Jean-Jacques, ohatra; ny filohan’ny antoko GFFM, ny pasitera Mailhol. Ao ireo natosiky ny zava-nitranga toy ny mpitarika ny sendikan’ny mpampianatra Sempama, Raharovoatra Jean, na ny filohan’ny Hafari malagasy, Rafanomezantsoa Jean Nirina; eny, na ny mpitsara iraisam-pirenena teo aloha izay filohan’ny Association Nosy malagasy (ANM), Ramaroson Arlette, aza, angamba.
Tsy misy fivoarana ny fiainam-bahoaka
Eo ireo mahita izay tsy fivoaran’ny fiainam-bahoaka, na samy miaiky izany aza ny rehetra, tao hatramin’ny Repoblika II no ho mankaty, toy ny sekretera nasionalin’ny PSD, i Bezaza Eliana, izay zafikelin’ny filoha Tsiranana; eny, na ny tamin’ny Repoblika III no ho mankaty aza, nahatapa-kevitra ny diplaomaty sady filohan’ny Ram, i José Vianey, hirotsaka. Eo ny mpanolotsaina faratampon’ny tolom-piavotana (CSR) tamin’ny Repobika II sady filohan’ny Udecma, Andriamorasata Solo Norbert.
Ao ireo efa nirotsa-kofidina tamin’ny taona 2013 toy ny filohan’ny PLD, Rabeharisoa Saraha; ny filohan’ny Vitatsika io, Raharimanana Patrick. Ankoatra ireo, misy ny fantatra eo amin’ny sehatra misy azy: ny mpihira, efa depiote teo aloha, Rasolofondraosolo Zafimahelo na i Dama, ny kohen Rivolala. Misy ny tsy fantatra ny maro (?), na holazaina eto aza.
Santionany na ampahany ihany ireo: samy manana ny programany sy ny mpanohana azy avy; eny, na ny tanjona kendreny aza. Misy ny be kajikajy handrava vato fotsiny? Na mikendry toerana hafa arakaraka ny vato azo fa tsy ho lany… Hifampitana marimarina ireo kandidà, nefa misy ny heverina avy hatrany ho matanjaka.